रेखा थापा किन लागिन् ‘पशुपति’तिर ? | Radio Langtang 90.3 Mhz
रेखा थापा किन लागिन् ‘पशुपति’तिर ?
रेखा थापा प्राय चर्चामा आईरहने नायिका हुन् । पछिल्लो समय उनको आफ्नो ब्यानरमा बनेको कार्तिक २ मा प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘रुद्रप्रिया’ को कारणले उनी चर्चामा थिईन् भने अहिले उनको चर्चाको प्रसङ्ग बदलिएको छ ।
केहिदिन अघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटेपछि सामाजिक सञ्जालमा रेखा थापा र कोमल ओलीलाई लिएर अनेक किसिमका ट्रोलहरु बनिरहेका छन् । यस्तैमा नायिका रेखा थापा पशुपति शम्शेर राणाको नयाँ पार्टी ‘नयाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक’मा प्रवेश गरेकी छिन् । पशुपति शम्शेरले खोलेको पार्टीको ‘लाईन’ मिलेका कारण आफु त्यस पार्टीमा आबद्ध भएको उनको भनाई छ ।
राजपालाई निर्वाचनमा आउन सरकारले रोक्योः उपेन्द्र यादव
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन्- प्रदेशको चुनाव गर्न सकिँदैन, पहिले संसदको गरौं
गतहप्ता किन आएन त नेपाल आईडल ? (भिडियोसहित)
नेपालकै चर्चित गायन रियालिटी शो ‘नेपाल आईडल’को चर्चा यतिबेला सबैतिर छ । नेपालमा नै पहिलोपटक अन्तराष्ट्रिय स्तरको फ्रेन्चाईज शो ‘नेपाल ...
नुवाकोट क्षेत्र नं. १ वाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार डा.रामशरण महतमाथि शनिबार औखरपौवामा धरपकड
ओखरपौवा कार्तिक १९, नुवाकोट क्षेत्र नं. १ वाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार वनेका कांग्रेस नेता तथा पुर्व अर्थमन्त्रि डा. रामशरण ...
जन श्रमदान र चन्दा संकलनबाट मोटरवाटो निर्माण
१३ बैशाख, नुवाकोट । नुवाकोटको पश्चिमी भेगमा रहेको किस्पाङ गाँउपालिको फिकुरीमा स्थानीयवासीले श्रमदानवाट मोटरवाटो निर्माण गरेका छन् । किस्पाङ गापा अन्तरगत साविकको फिकुरी गाविसको वडा ...